18, ဇွန်လ 2019
အက္ခရာများ, epilogues နှင့် epitaphs
[7junio, 2019 ] Una reflexión del momento, caracterizado por la incredulidad permanente	Sociedad
[6junio, 2019 ] Una España única, indivisible, compasiva y campechana	Sociedad
[22 မေလ 2019] Hoy se mueve más dinero dentro de una complejidad económica que beneficiaalos que más tienen y pueden rotar sus bolsas, por lo que se deduce que la actividad “financiera” ha vuelto para seguir brillando. Desgraciadamente los empleos siguen escasos y son precarios.	စီးပွားရေးကို
[21 မေလ 2019] Crónicas al vuelo para después comer mejor	Sociedad
[21 မေလ 2019] Acatando prometer constituciones y otros reclamos aparentes	စပိန်နိုင်ငံရေး
စတင်ပြုလုပ်ခြင်းမူဝါဒကစပိန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးCelaáအသံတော်သည်ချိုးငှက်၏ search အတွက်စပိန်၏ပျက်စီးလွယ်သောအစိုးရသယ်ဆောင်
ဝန်ကြီးCelaáအသံတော်သည်ချိုးငှက်၏ search အတွက်စပိန်၏ပျက်စီးလွယ်သောအစိုးရသယ်ဆောင်
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားမှ 400 ဗုံး: လေယာဉ်တင်သင်္ဘောခိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့သောစာဖြင့်ရေးသားအတူ "portavoza" စပိန်အစိုးရကလုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်ကြသည်ဖိုရမ်ကို exit နှင့် Gavia ပိတ်လိုက်ပါ။
22 စက်တင်ဘာလ 2018 Belz စပိန်နိုင်ငံရေး 1
စစ်မှန်တဲ့သမ္မတကတော်Celaáဆံ့ဖို့မရှိနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, Pedro Sanchez y က Cia-၏ "portavoza အစိုးရ" ။ ? သူအပေါ်မပြောတတ်နှင့် "ဆင်ခြေ" ရန်သူ၏နှုတ်ဖွင့်လှစ်အခါတိုင်း ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားမှလက်နက်ရောင်းချမှုသင်နှင့်အလွန်လျောက်ပတ်စွာမှာအမှုအရာယူနိုင်ပါတယ်အဖြစ်, တစ်ဦးကချိုးငှက်ရုတ်တရက်အချို့သည်၎င်း၏ "ဝမ်း" တွင်ရင် .. နှင့်ရိုးရိုး "shit" နှင့်အတူ convocataria ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်လည်းကမ္ဘာပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းရေး၏သင်္ကေတဆောင်လုလင်ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိကိုဖုံးကွယ်။
အဲဒီအစားမီးထိုးသို့မဟုတ်ငှက်ကြမ်းတပြည်ကိုမသင်ရသော Modelica မသည်စီးပွားရေးကျဆင်းမှု, ပြီးတော့အာရပ်သံတမန်ရေးနှင့်အလွန်ဣတ္ဥစ္စာများနှင့်လမ်း၏သူတို့ရဲ့အပြောအဆိုမျိုးကိုလိုက်နာသွားရန်လက်တို့ကိုကိုင်ပြီးအပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆို shamelessly ကြောင်းဖော်ပြ "အရာတစ်ခုမှာ၎င်းဒုံးကျည်များနှင့်အခြားတိကျစွာသိမ်းကျုံးအသုံးပြုသောရှိသူများဖြစ်ကြသည်", သူ့မျက်နှာပေါ်မှာခက်ခဲစကားရပ်နှင့်အတူဖျောပွပွီးနောကျအငြင်းပွားဖွယ်ရာမှပြန်ရောက်, အစားရွှေသည်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအသံတိတ်, "မြင့်မားသောတိပန့်များနှင့်မှားယွင်းတဲ့ Are ယီမင်ကိုသတ်မည်မဟုတ်".
မစ္စစ်Celaáတဦးတည်းကျွန်တော်နုံဖြစ်ကောင်းပညာရေးအတွက်, "piñatas" အားဖြင့်ပေါက်ကွဲရှုပ်ထွေးသည့်အခါမျှော်လင့်ထားသို့မဟုတ်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သင်နုတ်ထွက်ဖို့လာမယ့်ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်, စိုးရိမ်. မယ်လို့အဖြစ်မကြားသောကြောင့်, ၎င်း၏စံချိန်, စံညွှန်း, ရယ်မောခြင်း၏နောက်တစ်ကျော့ပြန်လာထက်တန်ခိုးကြီး ခိုထုတ်လွှင့်နိုင်မထက်ပိုလေးဆယ်ရောဂါများ histoplasmosis ဖြစ် အဆိုပါ untamed ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတို့တွင်အနည်းဆုံးအန္တရာယ်ရှိသည် y ယာယီနိမ့်ကနေအကြိုးခံစားသင့်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းစစ်နှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များအတွက်အများဆုံးအတွေ့အကြုံရှိသငျသညျဖုံးကွယ်ရန်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အထွက်ရှာတှေ့နိုငျကြိုးစားကြတစ်ခုခုမသိကြောင်းဖွစျနိုငျပေမယ့်တချိန်တည်းမှာပဲခို .. ဒီထက် bloopers နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အခွက်တဆယ်ကြွယ်ဝစေရန်အချိန်ယူ, အလိပ်ပြင်ပေး ဒီကိစ္စကိုလိုအပ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုကယ်တင်သော။ သငျသညျအာရုံစိုက်အားလုံးသည်:
အဘယျသို့ရှိအမှန်တကယ်, စပိနျနည်းပညာနှင့်တိကျစွာဒုံးကျည်များကိုဝှကျထားလက်နက်ခဲယမ်းနားလည်သဘောပေါက် 7.62 porrillo ဌထောက်ပံ့နေကြတယ်အတိအကျပစ်မှတ်ထား "စပိန်မှာလုပ်" 400 လေဆာအဖြစ်မတ်ဗုံးသူတို့ကသွားပါ, အော်ပရေတာ enervated နှင့်ဒဏ်ငွေသွေးခုန်နှုန်းသတိထားဖြစ်ပါသည်, နှင့် "pupa အများကြီး" ၏ "ကြမ္မာငင်" သတ္တုတမန်တို့ကိုပစ်မှတ်ထားတစ်ကြိမ်လျှင်နှောင့်နှေးသည့်ဖြစ်နိုင်ချေအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ရှေးဟောင်းနာရီကဲ့သို့သောယန္တရားကြိုးရှိသည်နှင့် သူတို့ကသိပ်ဆူညံသံနှင့်မျှမထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူပေါက်ကွဲတဲ့ခိုလှုံရာရှာဖွေရေးအတွက်လေထုထဲတွင် swinging, သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း .. တစ်ဝက်များမှာသို့မဟုတ်သုံးခုတစ်ဝက်စက္ကန့်နှောင့်နှေးနှင့်အတူအခန်းထဲရှိလည်းညှိုးနွမ်း !. ဒါကြောင့်သမ္မတကတော် Isabel Celaá။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ထိုကဲ့သို့သောထစ်အငေါ့, အစင် Louie "Boom" စတိုင်ခွင့်လွှတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုနားထောငျဖို့မဖြစ်နိုင်ပုံကိုကျေးဇူးတင်ကိုသိတော့မှပါလိမ့်မယ်။
လာမယ့်အချိန်အထိ မစ္စစ်Celaáကျနော်တို့က Hawk ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးကျွန်တော်ခိုနှင့်အတူရောထွေးစေနိုင်သည်ဟုငါသိ၏။
လိုင်စင်အမျိုးအစား: non-ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်, အရည်အချင်း, အဘယ်သူမျှမဆင်းသက်လာတဲ့ work
License ကိုအကျဉ်းချုပ်: သင်ရေးသားသူ (s) ကိုတစ်ခုပေးခြင်းထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများပါဝင်သည်ပေး, Non-စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပြုပြင်မထားတဲ့ပုံစံ၌ဤအကြောင်းအရာကူးယူနှင့် re-ထုတ်ဝေရန်ကနိုင်ပါစေ။ သငျသညျလက်ရာများကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုမထားပေ။
လိုင်စင် URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
အဆိုပါ Gibraltarian ဝန်ကြီးချုပ်နောက်တဖန်အာရုံကိုဆွဲရန်အသုံးပြုသည့်စပိန်အဖြစ်အပျက် "shared" နှင့်ဗြိတိန်ရေ
Isabel Coixet, ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ, ကာတာလပူးပေါင်းကြံစည်မှုသူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရေးမှတ်ထားခြင်း
ပီ သူ says:
23 မှ 2018 စက်တင်ဘာလ 05: 28
Una reflexión del momento, caracterizado por la incredulidad permanente 7, ဇွန်လ 2019
Una España única, indivisible, compasiva y campechana 6, ဇွန်လ 2019
Hoy se mueve más dinero dentro de una complejidad económica que beneficiaalos que más tienen y pueden rotar sus bolsas, por lo que se deduce que la actividad “financiera” ha vuelto para seguir brillando. Desgraciadamente los empleos siguen escasos y son precarios. 22 Mayo, 2019
Crónicas al vuelo para después comer mejor 21 Mayo, 2019
Acatando prometer constituciones y otros reclamos aparentes 21 Mayo, 2019
“No he podido evitar oírlo todo. Tenía la oreja pegadaala puerta.” Lástima que yo no tenía la llave para abrirla cuando tuve la oportunidad de hacerlo. 19 Mayo, 2019
Existen otros mundos, y el “anormal” de “Charlie” es uno de ellos para el hoy y por siempre. Hablamos de Haití, con exclusiones personales dignas de resaltar y en ningún caso generalizadas, aunque sí muy mayoritarias. 16 Mayo, 2019
Facebook ပေါ်မှာ Follow
1796 ပြီးသားတာဝန်များကိုတာဝန်များကိုယူဆသူကို "အလင်းပေး" လူရှိကြ၏
5 ဒီဇင်ဘာလ 2017 4
သူတို့ဟာ saitenes ကြိုက်နှစ်သက်မှာ "ဉာဏ်အလင်း" ကိုဒီartículoTweetMientras Share, အရာအားလုံးရှိရှိကွှေးကျွောအနက်အကိုင်းအခက်များက fomented ပုသိကျော်လွန်ပြီးတကမ္ဘာလုံး transverse ဦးတည်ချက်မပါရှိကွောငျးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမရှိဘဲခုခံကာကွယ်ဖို့ဒဏ်ငွေလောင်းကစား, ဖွစျလိမျ့မညျ [ ... ]
15 ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 5
မြို့များကို၏ကျူးကျော်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကသိမ်းပိုက်ကြမ်းပြင်တွင်ဒီartículoTweet Share ပြုလုပ်ကောင်းစွာ consistory ၏ရှေ့နေများကအလုပ်မလုပ်ဖို့ပြေလည်နိုင်နှင့်လက်ဝဲဘက်နှင့်ငိုကြွေးမြည်တမ်း [ ... ]
WebAssistance တည်းဖြတ်ဘလော့ | မူပိုင်ခွင့်© 2017 | မမြင်ရတဲ့ loners
အမှား: အကြောင်းအရာကာကွယ်ထားသည် !!
ငါတို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်အောင်ဒီ site cookies တွေကိုနှင့်အခြားနည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည်: ပိုမိုသိရှိလိုပါက။